Do you consider yourself successful? ﻿
Tags: describe management style work.
အင်တာဗျူး ဖြေဆိုသူအများစုသည် ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေဆိုရာမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက်တော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်အထိကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့ဖူးကြောင်းနှင့် ယုတ်ဆွအဆုံး လက်အောက် ငယ်သား အများစုက သူ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို ဘယ်လိုလိုက်နာကြကြောင်း ကိုယ်ရည်သွေး ပြောဆိုလေ့ ရှိကြသည်။ အောင်မြင်နေသော လုပ်ငန်းရှင်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအပေါ် အဓိက မျှော်လင့်သည့် အချက်မှာ-
လက်အောက်ငယ်သား လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအပေါ် စာနာနားလည်ပေးသလို တင်ပြလာသည့် အချက်များအပေါ်တွင် အလေးနက်ထား နားထောင်၍ လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အကြား နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေစေရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့် စီမံခန့်ခွဲသူမျိုးကို ပို၍ အလိုရှိကြသည်။ ထိုသို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ အများစုသာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ရယူနိုင်ကြောင်း လေ့လာစမ်းစစ်ချက်များအရ တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင် ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကို ဖြေဆိုရမည်ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း နားလည်မှုရှိစွာ စီမံခန့်ခွဲမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ကို လက်အောက်ငယ်သားနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကို သဘောပေါက်အောင် ရှင်းလင်းပြောဆိုပြီး၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုများကိုလည်း ဂရုတစိုက်နားထောင်ကာ မျှမျှတတ စီမံခန့်ခွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ရှင်းပြသင့်သည်။ www.jobless.com.mm